Asaramanitra : nivoaka ny arendrina demokraty (+vidéo) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Asaramanitra : nivoaka ny arendrina demokraty (+vidéo)
Nidina an-kianja koa amin’izao fotoana ny vondron’ny mpanohitra. Nanomboka tao amin’ny boriborintany voalohany ny fitetezam-paritra izay ataon’izy ireo hanamafisana ny andraikitry ny vahoaka manoloana ny fanosihosena ny demokrasia. Ankoatra ny fanehoan-kevitra politika izay nentin’ireo fikambanana isankarazany dia nisy ihany koa ny fitondrana izay voatsirambin’ny tanana ho an’ireo zanaka Malagasy miisa 500 teo amin’ny fokontany Andavamamba Anatihazo sy ny manodidina.
Sary vondron'ny mpanohitra
Isan’ny nozaraina tamin’ireo kilonga ireo ny arendrina izay efa mivoy sahady hafatra fanabeazana mikasika ny foto-kevitra ijoroan’ny vondrona dia ny fampanjakana ny demokrasia. Nampanantena ny mbola hitohizan’ny fidinana an-kianja toy zao ireo mpandrindra ka ny boriborintany faharoa eto an-drenivohitra indray no hampiantrano amin’ny manaraka.